Tsy holavina amin’ny Mozambikana noho ny fomba fitafiny intsony ny fitsaboana · Global Voices teny Malagasy
Teo aloha ny toeram-pitsaboana afaka tsy mikarakara noho ny dreadlocks na fanaovana shorts
Voadika ny 13 Novambra 2021 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, عربي, русский, Ελληνικά, Português
Mifarana hatreo ny tsy fahazoana fitsaboana noho ny fomba fitafy | Sary Kiadin'Olompirenena ho amin'ny Fahasalamana (nahazoana alalana, Novambra 2021)
Taona maro izay, tsy nisy loatra ny niteny ny fitsipiky ny hopitaly manakana marary noho ny fitafiany na ny bika aman'endriny any Mozambika. Nanomboka niova ny toe-draharaha tamin'ny Jona 2020 rehefa misy fikambanana antsoina hoe Kiadin'Olompirenena ho amin'ny Fahasalamana (OCS) namoaka fanangonan-tsonia mitaky ny fahazoan'ny Mozambikana rehetra fitsaboana mitovy — tsy ijerena tavan'olona.
Mandra-pahatongan'io fotoana io, ny olona manao akanjo fohy zipo, kiraro tsotra, short, fitafiana fanatanjahan-tena, akanjo mampiharihary vatana/foitra, eny fa na dia ireo mandrandrana volo ho dreadlocks aza dia mety averin'ny hopitaly sy ny mpanome tolotra fitsaboana mody maina.
Namoaka fikarohana momba ny lohahevitra ny OCS, milaza fa fanitsakitsahana mazava ny zon'olombelona ny fanakanana olona tsy hiditra toeram-pitsaboana noho ny fomba fitafiny. Manitsakitsaka ny Lalàmpanorenana Repoblikana an'i Mozambika sy ny fifanekena iraisam-pirenena ho amin'ny fiarovana ny Zon'olombelona, ​​toy ny Sata Afrikana momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka izany fomba izany.
Araka ny OCS, tamin'ny Oktobra 2020, ny Minisiteran'ny Fahasalamana (MISAU), amin'ny alalan'ny Fitaleavam-Pirenena amin'ny Tolo-tanam-pitsaboana, dia namoaka tenimidina nanakivy matihanina ara-pahasalamana handrara ny olona amin'ny fidirana toeram-pahasalamana noho ny fomba fitafiny.
Na izany aza, herintaona monja tatỳ aoriana, tamin'ny Oktobra 2021, nisy ny fepetra noraisina nihatra tamin'ny fomba ofisialy mandrara ny fanavakavahana, izay navoaka any amin'ny hopitaly manerana ny firenena. Niantso izany fihetsika izany ho zava-bita lehibe ny OCS, indrindra mandritra ny areti-mifindra Coronavirus;
Voarara ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ny misoroka ny fidiran'ny olona amin'ny tolo-pitsaboana noho ny fomba fitafy
Nanomboka nametraka afisy tany amin'ireo toeram-pitsaboana tao an-tanànan'i Maputo, mirakitra hafatra nanambara ny fiafaran ‘ny fanakanana fidirana amin'ny toeram-pitsaboana noho ny fomba fitafy ny Kiadin'Olom-pirenena ho an'ny Fahasalamana (OCS)
Niravoravo Iva Mugalela, mpampianatra dihy, tao amin'ny pejiny Facebook, nilaza fa ny fanapahan-kevitra nandrasana ela izany:
Tolona be dia be, saingy soa fa natao… Manantena aho fa miparitaka any amin'ny andrim-panjakana hafa izany…. fa ny amin'ny dreads ???? Clélia Francelina, fantatro izany dia ampahany amin'ny asanao izany, mankalaza e… Julio Messa, izay izany, fara faharatsiny ianao afaka manao short, tsy misy rarin-tsaina (na dia ny tsy mandeha aza no zavatra tsara indrindra).
Hiara-mandeha amin'ity bokikely anaty kitapoko sy ny sary amin'ny telefaoniko ity aho…
Nanamarika mihitsy aza i Nilza Nhamachua fa ny fomba fiasan'ny hopitaly ao Mozambika dia vokatry ny holatra (henatra) eo amin'ny fiainana andavanandro:
Mbola miady ao anatin'ny fianakaviako mba hahatakaran'ny olona fa tsy lasa hafa amin'ny mahaizy, amin'ny fomba fisaina momba ny fiaraha-monina ny fanaovana Dreadlocks. Tsy avy eny andalambe fa avy ao an-trano mihitsy io fanamenàrana io. Mila miala amin'ny fanjanahan-tsaina isika.
Ao amin ‘ny famoahana ihany, nisy ireo nangataka tokony handehanan'ny fanjakana lavitra kokoa amin'ny fanatsarana ny fanomezana ny tolotra ara-pahasalamana ao amin'ny firenena, hoy i Mendes Alfazema:
Tokony horaràna amin'ny matihanin'ny fitsaboana ny manontany zavatra tsy tena ilaina amin'ny marary mila fikarakarana haingana….Narary tsy nisy tahaka izany aho, teo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana fa mbola tsy te-hijery ahy ry zareo raha tsy mameno ny fepetra.
Tsy manana fototra ara-dalàna any Mozambika ny fameperana ara-fitafy, ary mihevitra ny Kiadin'Olompirenena ho amin'ny Fahasalamana fa nifototra tamin'ny fomba amam-panao sy riba eo an-toerana no nipoiran'ny fandraràna teo amin'ny sehatry ny asa.
Na izany aza, nanamarika ny famakafakan'ny fikambanana fa tsy azo tanterahana ny maka angon-drakitra na isa mazava momba ny fijalian'ny olona noho ny fameperana. Noho izany, manantena ny Kiadin'Olompirenena ho amin'ny Fahasalamana hanangona vokatry ny fanovana eo amin'ny servisim-pitsaboana ao Mozambika.